भोट माग्न देउवाले बनाए टास्क फोर्स, रामचन्द्र नेता ब्यवस्थापनमै ब्यस्त – YesKathmandu.com
सोमबार १७, फागुन २०७२
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफु र आफ्नो प्यानललाई चुनाव जिताउन ‘टास्क फोर्स’ परिचालन गरिसक्दा पनि संस्थापन पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल अझै सर्वसम्मत उम्मेद्धार बन्न सकेका छैनन् । संस्थापन पक्षका नेताहरुलाई आश्वासन बाँडेदैमा उनी ठिक्क छन् ।
काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफु र आफ्नो प्यानललाई चुनाव जिताउन ‘टास्क फोर्स’ परिचालन गरेका छन् । सात प्रदेशका नेताहरुलाई मेटेर उनले टास्क फोर्स गठन गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
वानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय राखेर चुनावी अभियानमा जुटेका देउवाले दुई प्रकारको टास्क फोर्स निर्माण गरेका छन् । संस्थापन पक्षका असन्तुष्ट नेताहरुलाई समेटन पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा एउटा फोर्स गठन गरेका छन् भने प्रत्येक प्रदेशलाई समेटने गरी अर्काे फोर्स गठन गरेको स्रोतले बताएको छ ।
संस्थापन पक्षका असन्तुष्ट नेताहरुसँग छलफल गरी देउवा प्यानलमा ल्याउन खड्का, प्रकाशशरण महत, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरु बरालसहितको टोली निर्माण गरेका छन् । उनीहरुले संस्थापन पक्षका असन्तुष्ट नेताहरुसँग भेटघाट र छलफललाई तिव्रता दिएका छन् । पदाधिकारी पदमा उम्मेद्धार नहुँने नेताहरुलाई छानेर उनले उच्चस्तरिय फोर्स बनाएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी देउवाले प्रत्येक प्रदेशका आफु निकटका नेताहरुको छुट्टै फोर्स गठन गरेका छन् । प्रदेशबाट गठन गरिएको टोलीमा राजिव ढंगाना, बालकृष्ण खाँड, किशोरसिंह राठौर, किरण पौडेल, ऋषिकेश जंग शाह, नैनसिंह महर रहेका छन् ।
प्रदेशमा खट्टिएको टोलीले सवै प्रतिनिधहरुलासँग भेटघाट गर्ने र आवश्यक परे देउवासँग पनि प्रत्यक्ष भेट गराउने काम गर्न थालेको छ । सवै जिल्लाका प्रतिनिधीहरुका बस्ने ब्यवस्थापनको जिम्मा पनि यही टोलीले लिएको छ ।
सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल भने संस्थापनका नेताहरु ब्यवस्थापनमै हैरान भएका छन् । महाधिबेशन चलिरहेका बेला सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि संस्थापन पक्षबाट पाँच जना सभापतिका आकाँक्षी देखिएका थिए । आकाँक्षीहरुलाई मनाउन कार्यबहाक सभापति रामचन्द्र पौडेल धमाधम आश्वासन वाँड्न थालेका छन् ।
कोइरालाको निधन भएपछि कार्यबहाक सभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गिरिजा पुत्री सुजाता कोइराला र डा. रामशरण महतले सभापतिमा दावेदारी पेश गरे । दावेदारी पेश गर्ने सवैलाई पौडेलले पदकै आश्वासन बाँडेका छन् । महामन्त्री प्रकाशमानलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका छन् भने अर्का महामन्त्री सिटौलालाई संसदीय दलको नेता बनाउने आवश्वासन दिएका छन् । आश्वासनमा आश्वस्त हुँदै सिंहले सभापतिमा पौडेललाई सघाउने निस्कर्षमा पुगेका छन् भने सिटौलाले आफ्नो दावेदारी कायमै राखेका छन् । राजधानीका तीन स्थानमा सम्पर्क कार्यालय राखेर सिटौलाले सभापतिको प्रचार गरिरहेका छन् ।
कार्यबहाक सभापति पौडेलले सभापतिका अर्का आकाँक्षी डा. रामशरण महतलाई मनोनित महामन्त्री बनाउने बचन दिएका छन् । मनोनित महामन्त्रीको आश्वासन पाएपछि महत पौडेलका पक्षमा खुलेर भोट माग्न थालेका छन् । उनले पौडेललाई संस्थापन पक्षको सर्वसम्मत उम्मेद्धार बनाउन पनि लागि परेका छन् ।
पौडेलले विभिन्न पद विभिन्न नेताहरुलाई बाँड्दै गएपछि र बिधानपनि संशोन हुन नसक्ने भएपछि गिरिजा पुत्री सुजाता कोइराला पनि सभापतिमा उम्मेद्धारी घोषणा गरेकी छिन् । उनलाई भावी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पौडेलले दिएका छन् । पौडेलको आश्वासनलाई उनले अझै विस्वास गरि नसकेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
सुजातालाई मनाउन सशांक असफल
One thought on “भोट माग्न देउवाले बनाए टास्क फोर्स, रामचन्द्र नेता ब्यवस्थापनमै ब्यस्त”
कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी गृहमन्त्री गौतमले नै समाल्ने
‘आन्दोलितलाई फकाउन मात्रै धाँधली छानबिन समिति’
राज्यकोषबाट दलका कार्यकर्तालाई २० लाख वितरण